Ukucubungula Izingxenye Zokucubungula - K-Tek Machining Co., Ltd.
I-K-Tek Machining inikezela ngezinsizakalo ze-OEM / ODM, siyakwazi ukuhlinzeka ngamakhono kubaholi bezimboni ezahlukahlukene emakethe. Izinsizakalo zethu zokugaya zifaka imishini eminingi ye-CNC yokugaya, futhi imikhiqizo yethu ivame ukusetshenziselwa imishini, i-elekthronikhi, ezishintshayo, ezezimoto, ezokwelapha, amandla amasha neminye imikhakha.
Yini inqubo yekhompyutha yokulawula izinombolo milling?
I-CNC milling isebenzisa ithuluzi lokusika elijikelezayo elifana nokubhola, ngaphandle kokuthi ithuluzi elilodwa lihamba ngamazembe ahlukene ukwakha izinhlobo ezahlukahlukene, kufaka phakathi izimbobo nezikhala. Kuyindlela ejwayelekile ye-CNC machining ngoba yenza imisebenzi yokubhola ne-lathing. Le kuyindlela elula yokumba izimbobo zazo zonke izinhlobo zezinto ze-premium ukukhiqiza umkhiqizo ofanele webhizinisi lakho.
Precision Milling futhi esebenza kahle CNC izinhlelo
Ngokuphakela kwethu okupholisayo, singakwazi ukusika izinto ngokushesha kunezinhlelo zokupholisa ezijwayelekile, kanye ne-CAD / CAM, UG ne-Pro / e yethu, i-3D Max. ingasebenzisana ngokuphumelelayo namakhasimende ngobuchwepheshe futhi isheshise kakhulu yonke inqubo futhi ikunikeze imikhiqizo esebenza kahle kakhulu. Izikhungo zethu ezimbili zokugaya ze-CNC zifaka ama-knuckles okuzenzakalelayo asivumela ukuthi sishintshe kunoma iyiphi i-engeli. Ngokubambisana nokusetshenziswa kwamathuluzi ayindilinga, lokhu kusivumela ukufeza i-geometry eyinkimbinkimbi efanayo njenganoma imuphi umshini wama-eksisi amahlanu.
5-eksisi CNC milling umthamo
Lapho kukhulunywa ngomshini ojwayelekile we-5-eksisi, kubhekiswa kunombolo yezikhombisi lapho ithuluzi lokusika lingahamba khona, ukuthi ngemuva kokusetha ithuluzi lokusika lihamba linqamule izimbazo eziqondile ze-X, Y no-Z bese lizungeza kuma-axes A no-B, ngasikhathi sinye Milling futhi machining, futhi eliphezulu ebusweni ngomshini sekugcineni. Lokhu kuvumela izingxenye eziyinkimbinkimbi noma eziyinkimbinkimbi noma izingxenye ezinamacala amaningi zingacutshungulwa kuze kufike ezinhlangothini ezinhlanu zengxenye kusethaphu eyodwa. Lokhu kusekela onjiniyela bokuklama ukuklama izingxenye ezixubile ezinokukhulisa ukusebenza nokusebenza komkhiqizo wokugcina ngaphandle kwenqubo enomkhawulo.
Ikhwalithi ephezulu yokuqedelwa komhlaba: Kuyenzeka ukukhiqiza izingxenye ezisezingeni eliphakeme ezenziwe ngomshini kusetshenziswa abasiki abafishane ngejubane lokusika eliphakeme, elinganciphisa ukudlidliza okwenzeka kaningi lapho kusetshenzwa izimbotshana ezijulile ngenqubo ye-3-axis. Kwenza bushelelezi ebusweni sekugcineni emva machining.
Ukubeka isikhundla ngokunemba: 5-eksisi ukugaywa kanyekanye nemishini sekubaluleke kakhulu uma imikhiqizo yakho eqediwe kufanele ithobele ikhwalithi eqinile nokusebenza kokucacisiwe. I-5-axis CNC machining nayo iqeda isidingo sokuhambisa isiqeshana somsebenzi phakathi kwezindawo zokusebenzela eziningi, ngaleyo ndlela kuncishiswe ubungozi bephutha.
Izikhathi ezimfushane zokuhola: Amandla athuthukisiwe omshini womshini we-5-axis ahla ezikhathini zokukhiqiza ezinciphile, ezihumusha zibe yizikhathi ezimfushane zokuhola zokukhiqiza uma kuqhathaniswa nomshini we-3-axis.
Insimbi: I-Aluminium, Insimbi engenasici, iCopper, i-Steel, i-Brass, i-Titanium, i-Sterling silver, i-Bronze, njll.
Amapulasitiki aqinile nezinye izinto: Inayiloni, i-Acetal, i-Polycarbonate, i-Polystyrene, i-Acrylic, i-Fiberglass, i-Carbon fiber, i-Teflon, i-ABS, i-PEEK, i-PVC, njll.